पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन खर्च सस्तो ! Bizshala -
पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन खर्च सस्तो !
प्राधिकरणका अनुसार रु २२ को विद्युत् प्रयोग गर्दा विद्युतीय मोटरसाइलकबाट ६० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ । प्रतिकिलोमिटर ३७ पैसामा यात्रा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलभन्दा विद्युतीय मोटरसाइकलको खर्च दुई रुपैयाँ २३ पैसा प्रतिकिलोमिटर सस्तो पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनौपचारिक रुपमै भए पनि अध्ययन गरिएको र सकारात्मक परिणाम आउने छ।
प्राधिकरणको हालको तयारीका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १२ प्रतिशत पेट्रोलको आयात घटाउन सकिन्छ भने नौ प्रतिशत डिजल आयात घटाउन सकिन्छ । वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो भने सोही आवसम्म शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी ग्यासको आयात ६८ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ ।